600 Lakh (Kyats)
Ad Number S-8098652
မြောက်ဒဂုံမြို့နယ်တွင် မြေကွက် ရောင်းရန် ရှိသည်။
မြောက်ဒဂုံမြို့နယ်၊ ပြည့်ထောင်စုလမ်းမကျယ် ( ဆရာစံလမ်းမကြီ...
09 5173690, 09 5185534, 09 5040160
Ad Number S-8098230
စိုးစံ(လင်း) အိမ်ခြံမြေ ၀န်ဆောင်မှုကုမ္ပဏီလီမိတက် Close
Featured Project Ad
1250 sqft, Skysuites Condo, Yankin
- ရန်ကင်းမြို့နယ် ၊ ရန်ရှင်းလမ်းမ ပေါ်တွင်တည်ရှိသည်။...
Say I found this advertisement at iMyanmarHouse.com
Ad Id S-7751503
ကွညျမွငျတိုငျလမျးမကယျြ ပွငျဆငျပွီးအခနျးကယျြ Master(1)single(1) တိုကျအသဈ
Kyeemyindaing | Yangon Region
ကွညျမွငျတိုငျလမျးမကယျြ ပွငျဆငျပွီးအခနျးကယျြ Master(25*50) (1)singl...
Ad Number S-8098141
မရမ်းကုန်းမြို့နယ်၊ (၈)မိုင်အနီး ( 55' x 40' ) အကျယ်ရှိ M...
4,450 Lakh (Kyats)
Ad Number S-8098121
ဗဟန်းမြို့နယ်၊ ရွှေတောင်ကြား ( 62' x 63' ) အကျယ်ရှိ MBR -3, BR - 3, A/C ပါရှိေ...
18,000 Lakh (Kyats)
09 5185539 , 09 5012951
Ad Number S-8097903
ကမာရွတ်မြို့နယ်တွင် (၃)ထပ်ခွဲ လုံးချင်းတိုက် ရောင်းမည်။
ကမာရွတ်မြို့နယ်၊ သံလွင်လမ်း ( 50' x 80' ) အကျယ်ရှိ ရေကူးကန်ပါ , MBR - 4, BR - 1...
19,980 Lakh (Kyats)
09 5185534, 09 5173690, 09 5040160
Ad Number S-8097804
သင်္ဃန်းကျွန်းမြို့နယ်တွင် (၃)ထပ်လုံးချင်းတိုက် ရောင်းရန် ရှိသည်။
သင်္ဃန်းကျွန်း၊ ပြည်သာယာလမ်းအနီး ( 40' x ...
09 5040160, 09 5185534, 09 5173690
Ad Number S-8097762
လှိုင်မြို့နယ်တွင် (၂)ထပ်လုံးချင်းတိုက် ရောင်းရန် ရှိသည်။
လှိုင်မြို့နယ် ၊ မြကန်သာဥယျာဉ်အိမ်ရာ ( Grand...
Ad Number S-8097731
အလုံ ၃လွှာ အရောင်းသိန်း၃၀၀
300 Lakh (Kyats)
Ad Number S-8098831
မင်္ဂလာလမ်းမကြီးကျောကပ် ရပ်ကွက်သန့် တောင်ဥက္ကလာပမြို့နယ်
320 Lakh (Kyats)
Ad Number S-8098799
3,950 Lakh (Kyats)
Ad Number S-8098777
KyalSinLinn Real Estate Agency Company Close
🙏🙏🙏သံသုမာလမ်းမပေါ် Mini Condo အသင့်ပြင်ပြီးရောင်းပါမည်...🙏🙏🙏
720 Lakh (Kyats)
Ad Number S-8098762
Aung Ta Khit Real Estate Close
Tamwe | Yangon Region
Ad Number S-8098743
12×55 (7) လပိုငျမှာနလေိုရပွီး
Dawbon | Yangon Region
230 Lakh (Kyats)
095154484 09777054666 09971777811
Ad Number S-8098728
12 ×55. (7)လပိုငျးမှာနလေိုရပွီး
170 Lakh (Kyats)
Ad Number S-8098706
Mingalartaungnyunt | Yangon Region
750 Lakh (Kyats)
Ad Number S-8098692
240 Lakh (Kyats)
Ad Number S-8098685
250 Lakh (Kyats)
Ad Number S-8098672